» नेपाल लाइफको व्यतित बीमालेख नविकरण बम्पर छुट अफर आजबाट सुरु
नेपाल लाइफको व्यतित बीमालेख नविकरण बम्पर छुट अफर आजबाट सुरु
२०७६ मंसिर १९ गतेसम्म व्यतित भएका सबै प्रकारका बीमालेख नविकरण हुने
२० मंसिर २०७८, सोमबार २१:३१
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यतित बीमालेख नविकरण गर्न बम्पर छुट योजनाको आजबाट सुरुवात गरेको छ । कम्पनीले आजबाट सुरु गरेको बम्पर छुट योजनामा २०७६ साल मंसिर १९ गतेसम्म व्यतित भएका बीमालेखहरु नविकरण गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न कारणले समयमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसकेका निम्न तथा मध्यम बर्गीय बीमितलाई लक्षित गरी यस्तो योजना ल्याएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत २०७६ सालसम्म व्यतित भएका सबै प्रकारका बीमालेखहरु नविकरण हुनेछन् ।
बीमा शुल्क नियमित भुक्तानी गर्न नसकी अल्झिएका बीमालेखलाई व्यतित बीमालेख भनिन्छ । बीमा शुल्क नियमित भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो बीमितको जोखिम वहन हुँदैन । कम्पनीले विभिन्न कारणले व्यतित भएका बीमालेखलाई छुट अफर ल्याएपछि अप्ठेरोमा परेका अभिकर्ताहरुले नविकरण गरी लाभ लिन सक्ने भएका छन् ।
कम्पनीले आज मंसिर २० गतेदेखि यस्तो छुट सुविधा सुरु गरिएको जनाएको छ । आगामी माघ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने उक्त छुट सुविधामा अर्बौ रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन हुने विश्वास लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हिजो जारी सर्कुलरका अनुसार अधिकम् ३० हजार रुपैयाँ वा कूल ब्याजका ३५ प्रतिशत रकम छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तो सुविधासँगै व्यतित भएका बीमालेख पुनतार्जगी गर्ने अवसरका कारण हजारौं बीमितहरु बीमा सेवाबाट रक्षावरण हुने देखिएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी देशकै सबैभन्दा ठूलो जीवन बीमा कम्पनी हो । सो कम्पनीमा करिब १५ लाख बीमित आबद्ध भएका छन् भने करिब सवा खर्ब भन्दा ठूलो जीवन बीमा कोष खडा गरिसकेकोछ ।
2 thoughts on “नेपाल लाइफको व्यतित बीमालेख नविकरण बम्पर छुट अफर आजबाट सुरु”
Dinesh maharjan says:
6l6 month ko tirna vhanar.
2019 10 07 ma (6month ko 18098 tirako).
Taspachi aajako din samma tirako chhaena kati tirnu parla sir
Madhab Acharya says:
एक पटक ब्याज छुट दिइसकेकालाइ नदिनु भनेको केबल ल्याउनका लागाी मात्र ल्याइएको मात्र हो
किनकि यसले सोचे जति रकम उठ्न सक्दैन